Muuri News Network » XOG: Dhismaha Wakiilada K/Galbeed & Xiliga lagu dhawaaqayo
XOG: Dhismaha Wakiilada K/Galbeed & Xiliga lagu dhawaaqayo
Xubnaha maamulka Koofur Galbeed ayaa iclaamiyay in dhawaan lasoo idleynayo dhismaha baarlamaanka maamulkaasi uu yeelanayo oo lagu mashquulsan yahay, sida ay sheegeen wasiiro ka tirsan maamulka Koofur Galbeed.
Wasiir Diinta iyo uqaafta ee maamulka Koofur Galbeed Mudane Macalin Barre, ayaa sheegay in todobaadyada soo socda la idleyn doono dhismaha maamulka Koofur galbeed lana soo dhisayo xubnaha baarlamaan ee maamulkaasi uu yeelanayo.
Wasiirka ayaa sheegay in labo todobaad kadib maamulka uu yeelanayo baarlamaan iyo hogaankiisa ugu sareeyo, sida uu hadalka u dhigayna wuxuu cadeeyay in la dhameeyay khilaafkii ka dhacay dhismaha baarlamaanka.
Wasiirka ayaa intaasi ku daray in beelaha ku sugan deegaanada maamulkaasi laga doonayo iney ku qanacsanaadaan Odayaasha matalaya waxyaabaha ay u keenaan.
Ugu dambeyn wuxuu si rasmi ah u sheegay in todobaadyo gudahood lagu soo dhisi doono baarlamaanka maamulka Koofur Galbeed.